Markabkii siday Muhaajiriinta Afrika oo ku xirtay Spain | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Markabkii siday Muhaajiriinta Afrika oo ku xirtay Spain
Markabkii siday Muhaajiriinta Afrika oo ku xirtay Spain
Muqdisho (SNTV)- Dufacadii u horeysay oo ka tirsan boqolaal Muhaajiriin ah ayaa gaaray Spain, kuwaasi oo laga soo badbaadiyay badda dhexe, kadib markii Talyaaniga iyo Malta ay diideen in ay qaabilaan.
Saddex ka mid ah Doomaha dheeraaya ayaa badda gudaheeda kasoo daabulay Tahriibayaasha oo u badan Afrika.
Kooxaha Caafimaadka iyo Booliska ayaa markiiba gurmad Caafimaad u fidiyay Muhaajiriinta, iyaga oo su’aalaya waxyaabaha ay u baahan yihiin, si ay uga soo kabtaan diifta iyo dhibaatadii kasoo gaartay Badda.
Dowladda Spain ayaa sheegtay, in si dhow ay ula soconeyso Xaaladooda islamarkaana ay u sameeneyso baaritaan Caafimaad iyo daryeel intaba.
Badbaadinta Tahriibayaasha ayaa ka dambeysay, xilli cida qaabileysa soo galootinga ay muran ka dhex dhalisay Midowga Yurub diidmada Italy kadib, waxaase aqbalay Spain.
Tirada Dadkaan oo gaareysa 629 ayaa waxaa ka mid ah 11 Caruur oo da’dooda ay ka yar tahay 13 iyo toddobo Haween oo Xaamilo ah sida ay sheegeen Mas’uuliyiinta Spain.
Boqolaal ka tirsan Hay’adda laan-qeyrta cas ayaa gaaray Dekada magaalada Valencia oo ah halka ay caga dhigatay Markab sida Muhaajiriinta.
Kumaan Qof oo ka tagay Afrika ayaa ku dhintay Badda, iyaga oo raadinaya nolal dhaanta mida dalalkooda, iyaga oo sii maraya Liibiya.
Spain oo aan ka mid aheyn dalalka qaabila Qaxootiga, ayaa la aamisan yahay in cadaadis kaga yimid Midowga Yurub ay u ogaalatay in Markabka uu ku xirto dalkeeda hase ahaatee wali ma cadda cida qaabilo doonta Qaxootigaan.
Previous articleHay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda oo xafiis cusub ka furatay Buula-burde
Next articleDuqaymo ka dhacay gobolka Gedo oo khasaaro loogu gaystay Al-shabaab.